Thursday July 26, 2018 - 15:06:13 in Wararka by Super Admin
Afhayeen u hadlay wazaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka ku dhintay duqeyntaas ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray, iyadoo sidoo kale ay jiraan dhaawacyo kala oo lagula tacaalayo goobaha caafimaadka.
Military-ga Yahuudda ayaa sheegtay duqeymahan waxayna sheegeen in ay ku beegsadeen xarumo ay kooxda Xamaas ku leedahay marinka Gaza inkastoo ilo wareedyo madax banaan ay tilmaamayaan in duqeymaha intooda badan lagu beegsaday xaafadaha dadka deegaanka.
Maamulka Yahuudda ayaa sheegay in duqeymaha uu kaga jawaabayo toogasho lagu qaaday ciidankooda oo ka dhacday meel u dhexeysa marin xuduudeedka Gaza.
Duqeymahan ayaa yimid iyadoo maalintii shaley ay dadka reer Gaza dhigeen mudaahaaraad ballaaran oo ka dhacay afaafka hore xad-beenaadka ay ku sugan yihiin ciidamada Yahuudda kaas oo lagu soo aadiyey boqol maalin guuradii ka soo wareegatay markii ay u bilowday kacdoonka loogu magacdaray masiiradii soo noqoshada.
Tan iyo markii uu bilowday kacdoonkaas waxaa la dilay ugu yaraan 138 ruux oo filistiiniyiin ah, halka sidoo kalena lagu dhaawacay 160,000 oo kale.